एन्ड्रोइडका लागि मास्टर रोयाल एपीके डाउनलोड [मोड गेम] - लुसो गेमर
एन्ड्रोइडका लागि मास्टर रोयाल एपीके डाउनलोड [मोड गेम]
एन्ड्रोइड गेमरहरूलाई सुपरसेल गेमहरूको ठूलो फ्यान मानिन्छ। कम्पनी क्लास अफ क्लान्स र क्ल्यास रोयाल जस्ता उत्कृष्ट खेलहरू लन्च गर्न जिम्मेवार छ। Clash Royale भित्रका स्रोतहरू सीमित छन् र खेलाडीहरूको अनुरोधलाई विचार गर्दै हामीले Master Royale Apk ल्यायौं।
जुन एक क्लिक विकल्पमा डाउनलोड गर्न निःशुल्क छ। यद्यपि खेलाडीहरू क्ल्यास रोयालसँग परिचित छन् र मास्टर रोयालसँग परिचित छैनन्। वास्तवमा, हामीले यहाँ प्रस्ताव गरिरहेको गेमप्ले आधिकारिक Clash Royale को मोडेड संस्करण हो।
जहाँ नायकहरू सहित स्रोतहरू प्रयोग गर्न अनलक छन्। संसाधन काउन्टरहरू पनि प्रत्येक लन्चमा स्वचालित रूपमा ताजा हुनेछन्। यदि तपाइँ मोडेड सुविधाहरू मनपर्छ र अवसरको फाइदा लिन तयार हुनुहुन्छ भने मास्टर रोयाल डाउनलोड स्थापना गर्नुहोस्।
Master Royale Apk के हो
Master Royale Apk आधिकारिक Clash Royale Mod को अनलाइन परिमार्जित संस्करण हो। मोड गेमप्ले भित्र, नायकहरू सहित सबै प्रो स्रोतहरू अनलक छन्। संसाधन काउन्टरहरू पनि अनगिन्ती रत्न र सुनको सिक्काले भरिएका छन्।
व्यावसायिक विकासकर्ताहरूले तेस्रो-पक्ष मोडेड खेलहरू स्थापना नगर्न सिफारिस गर्छन्। किनभने तिनीहरूले भित्र धेरै हानिकारक बगहरू भेट्टाए। जसले प्रयोगकर्ताको डाटा र अत्यावश्यक जानकारी चोरी गर्न मुख्य भूमिका खेल्छ।
यद्यपि, स्थापना गर्दा मोड खेल हामीले त्यस्तो कुनै समस्या फेला पारेनौं। मुख्य सुविधाहरू पहुँच गर्दै पनि, अनावश्यक अनुमतिहरूको लागि कहिल्यै सोध्नुहोस्। यसको मतलब गेमरहरूले डाटा चोरीको बारेमा चिन्ता नगरी परिमार्जित गेमको मजा लिन सक्छन्।
याद गर्नुहोस् कि रिसोर्स काउन्टरहरू स्वचालित रूपमा सुनको सिक्का र रत्नहरूले भरिनेछन्। जब गेमरहरूले स्मार्टफोन भित्र गेमप्ले पुन: लन्च गर्छन्। त्यसैले तपाईलाई प्रो सुविधाहरू मनपर्छ र साथीहरूसँग खेल्न तयार हुनुहुन्छ त्यसपछि मास्टर रोयाल गेम डाउनलोड गर्नुहोस्।
नाम मास्टर रोयाल
आकार 168 एमबी
विकासकर्ता मास्टर रोयाल
प्याकेज नाम net.infinity.royale
श्रेणी खेल - रणनीति
अनुप्रयोगको स्थापना र उपयोगको लागि पाठ्यक्रम सरल छ। गेमरहरूलाई यहाँबाट Apk को नवीनतम संस्करण डाउनलोड गर्न अनुरोध गरिन्छ। अब स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस् र त्यसपछि अनन्त प्रीमियम स्रोतहरूको आनन्द लिनुहोस्।
अधिकारीहरूका अनुसार, गेमप्ले गोप्य सर्भरहरूमा निजी रूपमा होस्ट गरिएको छ। जसको अर्थ पत्ता लगाउने र डाटा चोरी गर्न असम्भव देखिन्छ। यसबाहेक, विकासकर्ताहरूले सर्भरहरू भित्र सैन्य-आधारित सुरक्षा ईन्क्रिप्शन प्रत्यारोपण गर्छन्।
यदि हामी पहुँचयोग्य स्रोतहरूको बारेमा कुरा गर्छौं भने हामीले रत्न, सुनको सिक्का, नायकहरू, हतियारहरू, स्किनहरू, मोडहरू र शक्तिशाली स्पेलहरू आदि फेला पारेका छौं। गेमरहरूले सजिलैसँग आफ्नो सामाजिक मिडिया खाताहरू जस्तै फेसबुक गेमप्लेसँग सिङ्क्रोनाइज गर्न सक्छन्।
गेमप्ले भित्र प्रयोग गरिएको युद्ध मोड दुई फरक खण्डहरूमा वितरित गरिएको छ। पहिलो लडाई मोडले १ बनाम १ को प्रतिनिधित्व गर्नेछ जहाँ एक खेलाडी र विपक्षीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्। साथीहरूसँग खेल्न इच्छुकहरूले 1 बनाम 1 मोड रोज्न सक्छन्।
केही क्षेत्रहरूमा, खेलको मोडेड संस्करणले सहज रूपमा काम गर्न असक्षम हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा, हामी ती खेलाडीहरूलाई VPN प्रयोग गर्न र मुख्य ड्यासबोर्डमा सजिलै पहुँच गर्न सिफारिस गर्छौं। त्यसैले तपाईलाई मोडेड गेमप्ले मन पर्छ त्यसपछि मास्टर रोयाल एन्ड्रोइड नि:शुल्क स्थापना गर्नुहोस्।
खेलको मुख्य सुविधाहरू
Modded खेल डाउनलोड गर्न को लागी स्वतन्त्र छ।
मोड गेम स्थापना गर्दा मूलको समान इन्टरफेस प्रदान गर्दछ।
प्रो वस्तुहरू अनलक गर्नको लागि कुनै सदस्यता आवश्यक छैन।
अनन्त रत्नहरू प्रयोग गर्न उपलब्ध छन्।
असीमित गोल्डन सिक्का अपग्रेडको लागि पहुँचयोग्य छन्।
कुनै तेस्रो पक्ष विज्ञापनहरू देखिँदैनन्।
नायकहरू पहिले नै अनलक छन्।
स्थापना र खेल्न को लागी सजिलो।
मास्टर रोयाल एपीके कसरी डाउनलोड गर्ने
त्यहाँ धेरै वेबसाइटहरूले एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूको लागि मौलिक गेमिङ एप प्रस्ताव गर्ने दाबी गर्छन्। तर वास्तविकतामा, ती वेबसाइटहरूले नक्कली र भ्रष्ट फाइलहरू प्रस्ताव गरिरहेका छन्। त्यसोभए एन्ड्रोइड गेमरहरूले के गर्नुपर्छ जब तिनीहरू मौलिक एपीके पहुँच गर्न असमर्थ छन्?
यसैले तपाईं भ्रमित हुनुहुन्छ र आधिकारिक स्रोत खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी ती एन्ड्रोइड गेमरहरूलाई हाम्रो वेबसाइट भ्रमण गर्न सिफारिस गर्छौं। किनभने यहाँ हाम्रो वेबसाइटमा हामी एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूको लागि मात्र प्रामाणिक र मौलिक गेमिङ फाइलहरू प्रस्ताव गर्छौं।
हामीले यहाँ समर्थन गर्ने गेमिङ एप्लिकेसन विशुद्ध रूपमा परिमार्जन गरिएको सम्झनुहोस्। त्यसकारण यो गेमरमा निर्भर छ कि उसले कसरी खेल स्थापना र एकीकृत गर्न छनोट गर्छ। हामीसँग उत्पादनको प्रतिलिपि अधिकार कहिल्यै छैन। त्यसैले कुनै पनि गल्ती भएमा हामी जिम्मेवार हुने छैनौं।
हामीले पहिले नै हाम्रो वेबसाइटमा यहाँ धेरै अन्य मोडेड खेलहरू साझा गरेका छौं। जुन अपरेशनल र खेलको सन्दर्भमा अविश्वसनीय छन्। ती अन्य सापेक्ष खेलहरूको आनन्द लिन कृपया URL को पालना गर्नुहोस्, ती हुन् Nulls Brawl Grom Apk र FNAF सुरक्षा उल्लंघन Apk.
तपाइँ Clash Royale खेल्न मन पराउनुहुन्छ तर समर्थक खेलाडीहरु द्वारा पिटिए पछि निराश हुनुभयो। त्यसपछि हामी ती खेल खेलाडीहरूलाई मास्टर रोयाल एपीके स्थापना गर्न सिफारिस गर्छौं। जुन आधिकारिक गेमिङको परिमार्जित संस्करण हो र प्रो नायकहरू सहित स्रोतहरू पहिले नै अनलक भइसकेका छन्।
विभाग रणनीति, खेल ट्याग मास्टर रोयाल एन्ड्रोइड, मास्टर रोयाल एपीके, मास्टर रोयाल डाउनलोड, मास्टर रोयाल खेल, मोड खेल मेल अन्वेषण
एन्ड्रोइडका लागि गाचा क्लब संस्करण एपीके डाउनलोड [कार्यरत]